रिभ्यू २०१९ : यो वर्षका चर्चिच २१ घटना - Namaste Post
रिभ्यू २०१९ : यो वर्षका चर्चिच २१ घटना
नमस्ते पोस्ट २०७६, १३ पुष आईतवार २१:४७ 0
काठमाडौं: वर्ष सन् २०१९ मा पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरु नै बढी चर्चामा रहे भने केही ठूला दुःखद घटनाले विश्वलाई स्तब्ध बनायो। विशेषगरी अमेरिका र बेलायतको राजनीतिले विश्वका सञ्चारमाध्यमहरु ओगटे भने अन्य देशका पनि केही घटनाले स्थान पाए। सन् २०१९ का चर्चित विश्व घटनालाई यहाँ चर्चा गरिएको छ:
१. भेनेजुएलाको पक्ष-विपक्षमा विश्व विभाजित
सन् २०१९ को सुरुवात भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबाट सुरु भएको थियो। जनवरीमा २३ मा भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख ३५ वर्षीय हुँवा गुएइदोले आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि विश्व समुदाय विभाजित भयो। राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई निर्वाचित गरेको निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भन्दै उनले मदुरो अवैध राष्ट्रपति भएको तर्क गरेका थिए। गुएइदोको घोषणापछि चीन, रुससहितका केही ठूला देश र टर्की, क्युबा, बोलिभिया, उरुग्वे, मेक्सिकोसँगै इरान र उत्तर कोरियालगायतका देशले ५६ वर्षीय मदुरोको समर्थन गरेका थिए भने अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरु, ब्राजिल, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना र अष्ट्रेलिया, इजरायललगायत झण्डै ५० देशले गुएइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका थिए। तर मदुरो अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपति भवनमै रहन सफल भएका छन्।
बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको पार्टी कन्जरभेटिभ्सले संसदको निर्वाचनमा बेलायतलाई युरोपेली संघ (ईयू)बाट बाहिर निकाल्ने जनादेश सहितको बहुमत पाएको छ। हाउस अफ कमन्सका ६ सय ५० स्थानमध्ये घोषणा गरिएका ६ सय स्थानमा जोनसनको कन्जरभेटिभ्स पार्टीले ३ सय २६ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ। उनले आगामी जनवरी ३१ मा बेलायतलाई इयूबाट अलग्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले बहुमत गुमाएपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुदै उनी नयाँ निर्वाचनबाट फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
एक अर्कालाई प्रमुख दुश्मन ठान्ने उत्तर कोरिया र अमेरिकाको सम्बन्धमा सन् २०१९ मा उल्लेख्य प्रगति नभए पनि शीर्ष नेताको दुई बैठक भयो। अघिल्लो वर्षको जुन १२ का दिन सिङ्गापुरमा पहिलो पटक अंगालो हालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोन उनले यस वर्ष दुई पटक शिखर बैठक गरे। दोस्रो बैठक फेब्रुअरी २७ र २८ मा भियतनाममा भयो भने तेस्रो बैठक दुई कोरियाबीचको सिमानामा जुलाई १ मा भयो। दुवै बैठक ठोस उपलब्धीमूलक नभए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार नहुनुलाई नै सन्तोषको रुपमा हेरिएको छ।
बेलायतको एसेक्सस्थित वाटरग्लेड औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वी सडकमा राखिएको एउटा लरीको कन्टेनरभित्र ३९ वटा शव फेला परेका छन्। शवमध्ये ३८ जना वयस्क र एक जना किशोरको रहेको परिक्षणबाट पुष्टि भएको थियो। उनीहरु सुरुमा चिनियाँ नागरिक भनिएपनि पछि भने भियतनामी भएको अधिकारीहरुले बताएका थिए।
भारतीय कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पदबाट राजीनामा दिए। लोकसभा चुनावमा नराम्रोसँग हार व्यहोरेपछि राहुलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई राजीनामा नदिन शुभेच्छुकहरुले दवाव दिएपनि उनले मानेनन्। उनको अडानका कारण पार्टीका पूर्व अध्यक्ष तथा राजिवकी आमा सोनिया गान्धी नै अहिले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अन्तरिम अध्यक्ष रहेकी छन्।
जापानको इतिहासमा २ सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म नभएको घटना यस वर्ष भयो। त्यहाँका सम्राट सम्राट अकिहितोले स्वेच्छाले राजगद्दी त्याग्ने दुर्लभ निर्णय गरे। अकिहितोले गद्दी त्याग गरेपछि उनका छोरा ५९ वर्षका नारुहितो जापानको राजा भए। नयाँ राजाले राजगद्दी सम्हालेसँगै जापानमा नयाँ युगको सुरुवात भएको भनिएको छ।
९. भारतमा बाबरी मस्जिद र जम्मु कश्मिर
भारत सरकारले जुलाई ५ मा मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेश जारी गर्‍यो। त्यसपछि जम्मु-काश्मिर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश भएकाले भारतको इतिहासमा यसलाई महत्वपूर्ण दिनको रुपमा लिइएको छ। भारतकै अयोध्यामा वर्षाैँ पुरानो तथा विवादित मुद्दामा यस वर्ष फैसला भयो। उक्त स्थानमा रहेको रामको मन्दिर हिन्दूहरुले आफ्नो क्षेत्रका रुपमा दाबी गरेका थिए भने इस्लामहरुले पनि उक्त क्षेत्रमा वावरी मस्जिद बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। सर्वाेच्च अदालतले सो स्थान हिन्दूहरुलाई दिने र इस्लामहरुका लागि मस्जिद बनाउन अर्को ठाउँमा जमिनको व्यवस्था गर्न फैसला गर्‍यो।
श्रीलङ्कामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनबाट पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेका भाइ गोटावया राजापाक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। उनी निर्वाचित भएको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनील विक्रमासिंघेले राजीनामा दिए र आफ्नै दाइ तथा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकाका राष्ट्रपति बनेर बाहिरिएका राजापक्षे फेरि सत्तामा फर्किएको र दाइ प्रधानमन्त्री तथा भाइ राष्ट्रपति भएको विषय दक्षिण एसियाको एक चर्चाको विषय रह्यो।
इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीको अदालतमा बयान दिने क्रममा ढलेर मृत्यु भयो। अरब क्रान्तिपछि सन् २०१३ मा इजिप्टका राष्ट्रपति भएका मोर्सीलाई सेनाले एक वर्षमै अपदस्थ गरेको थियो। अदालतमा बयान दिन लागेको केहीबेरमा मोर्सी ढलेका थिए। प्रतिबन्धित मुस्लिम ब्रदरहुडका शीर्ष नेता ६७ वर्षीय मोर्सीका समर्थकहरुले भने उनको हत्या भएको आरोप लगाएका थिए।
जापानमा ‘मीटू’ अभियानबाट चर्चित ३० वर्षीया पत्रकार शिओरी इटोले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा जितेकी छन्। जापानमा यौनको विषयमा कम बहस हुने भएकाले यसलाई अत्यन्त महत्वका साथ लिइएको थियो। टोकियोस्थित ‘सिभिल कोर्ट’ ले इटोको पक्षमा फैसला सुनाउँदै पीडितलाई ३४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो। उनले आफूलाई करिअरबारे छलफल गर्न होटलमा बोलाएर बलात्कार भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न र आफुलाई क्षतिपुर्ती दिलाउन माग गरेकी थिइन्।
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ सिकिस्त बिरामी भएका छन्। भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका सरिफ जेलमै सिकिस्त बिरामी भएपछि बेलायत लगिएको थियो। उनको अवस्था अहिले पनि चिन्ताजनक नै रहेको छ। सन् २०१९ मै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी पनि भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सन् १९१७ को अगस्टदेखि २०१८ मेसम्म प्रधानमन्त्री भएका अब्बासीलाई पक्राउ गरिएको विषयलाई पनि चासोका साथ हेरियो।
१६. मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड
पाकिस्तानका अर्का पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दामा विशेष अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि विश्वभरि नै फैसलाले विवाद निम्त्याएको छ। बिरामी अवस्थामा विदेशमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफको मृत्युदण्ड हुनुअगावै निधन भएमा उनको शव तीन दिनसम्म सार्वजनिक ठाउँमा राख्नसमेत आदेश दिएपछि यो विषय थप चर्चामा रहेको छ।
नागरिकतासम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित गरिएपछि पनि भारतका पश्चिम बङ्गाल, कलकत्ता, तामिलनाडू राज्यलगायतका शहरी क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएको छ। आन्दोलनका क्रममा दर्जनौँको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ घाइते भएका छन्। पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्ने हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्मावलम्बीले भारतको नागरिकता पाउने नयाँ व्यवस्थाको विरोध भएको हो।
फिनल्यान्डकी ३४ वर्षीया सान्ना मरिन विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरकी प्रधानमन्त्री चयन भएको विषयले यो वर्षको अन्त्यतिर निकै चर्चा कमायो। प्रधानमन्त्री आन्ती रिन्नेले पदत्याग गरेपछि सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीले मरिनलाई सरकारको नेतृत्व गर्न चयन गरेको थियो। उनले मन्त्रीमण्डलमा महिलाको बहुमत र धेरै मन्त्री ४० बर्षभन्दा कम उमेरकालाई बनाएकी छन्। गठबन्धन सरकारमा ५ वटा दल सहभागी भएका छन्। ती सबै दलको नेतृत्व महिलाले गरेका छन्।
२०) आत्मघाती विष्फोटमा आइएस प्रमुखको मृत्यु
इस्लामिक स्टेट (आइएस)का पूर्वप्रमुख अबु बक्र अल बग्दादीको अमेरिकी आक्रमणमा सिरियामा मृत्यु भएको थियो। अमेरिकी आक्रमणको चाल पाएपछि उनले आत्मघाती विष्फोट गराउँदा उनीसहित केही आतंकवादी मारिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका थिए। उक्त अपरेसनबाट आइएससम्बन्धी धेरै गोप्य जानकारीसमेत हात परेको बताइएको थियो। अमेरिकी सेनाले स्थल तथा हवाई कारबाही गर्नुअघि आत्मसमर्पणका लागि गरेको अपिलको बेवास्ता गर्दै बग्दादीले आत्मघाती बम विस्फोट गराएका थिए, जसमा उनीसहित दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको भिडियो अमेरिकी सेनाले सार्वजनिक गरेको थियो।
२१) रुसले ल्यायो आफ्नो छुट्टै इन्टरनेट र ध्वनीभन्दा २० गुणा छिटो उड्ने क्षेप्यास्त्र
रुसले आफ्नो देशमा छुट्टै इन्टरनेट तयार पारेको छ। यससँगै रूस अन्य देशको इन्टरनेट पहुँचलाई हटाएर अब आफ्नै देशको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ। इन्टरनेट पूर्वाधारहरुमा वाह्य देशबाट साइबर आक्रमण तथा अरू देशको इन्टरनेटविना काम गर्छ या गर्दैन भन्रे परीक्षण भएको छ। यस प्रकिृयामा आफ्नो इन्टरनेटको सुरक्षादेखि प्रयोगकर्ताको सुरक्षासमेत जाँचिएको छ।
रुसले आवाजको गतिभन्दा २७ गुणा छिटो निशानामा पुग्न सक्ने अभनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल (क्षेप्यास्त्र)लाई सेनामा सामेल गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उक्त मिसाइल रुसी सेनासँग रहने घोषणा गरेका हुन्। अत्यन्तै तीव्र गतिका कारण कुनै पनि एन्टी-मिसाइल सिस्टमले यसबाट बचाउन निकै मुस्किल पर्ने बताइएको छ। यस मिसाइल हरेक मिसाइल डिफेन्स सिस्टमलाई पार गर्न सक्ने बताइएको छ।
यी बाहेक अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध, सिरिया, यमन, अफगानिस्तानमा जारी द्वन्द्वलगायतका विषय पनि वर्षभरि चर्चामा रहिरहे। यस्तै उतारचढावका बीच वर्ष २०१९ बिदा हुँदैछ र नयाँ वर्ष २०२० लाग्न थालेको छ।
-जीवन भण्डारी/राष्ट्रिय समाचार समिति
Cover PIC : National Geographic [strict copyright]